१६. डर - Harish Bk
Home/ Article/१६. डर
0 5,505 1 minute read
छब्बीस सय वर्ष अघि एउटा वयल गाडा पहाडी बाटोमा गुड्दै थियो । त्यस गाडाभित्र चालकबाहेक चारजना अरु सवार थिए– तीन सामान्य मान्छे र रक्सीले पुरै मात्तिएको एक रक्स्याहा । अचानक गाडा चिप्लेर भीरबाट खस्यो । उक्त दुर्घट्नामा रक्स्याहाबाहेक सबै मारिए । उस्लाई सामान्य चोट पटक मात्र लाग्यो । अरु सवारलाई पनि त्यतिमात्रै हुनु पर्ने थियो । तर, उनीहरुले ज्यानै गुमाए । प्रष्टैछ, दुर्घट्नाको कारणले हैन ‘डर’को कारणले उनीहरु मरे । के भएको थियो, त्यस्को पत्तो नै थिएन रक्स्याहालाई र त उनी डराएनन् । अनि मरेनन् । कथाको सन्देशले भन्छ, मान्छेलाई संसारले कम, डरले बढी मार्छ ।
अतः आफूले सोच्ने ८७ प्रतिशत डर हुँदै हुँदैन भने १३ प्रतिशत नकारात्मक घटना रोकिँदैन । त्यसैले यसको चिन्ता गर्नुको पनि कुनै तुक छैन । स्मरण रहोस् उपरोक्त कथामा वयलगाडा खसेर मान्छे मरेका हैनन् । मरिएलाकी भन्ने चिन्ता गरेकाहरु सवै मरेका हुन् ।